Soomaali / Fasallada K-12
Dugsiyada degmada St. Cloud 742 waa degmo u furan isdiiwaangalinta isla markakaana ku soo dhaweeynaya Iskuuladooda dhamman deegaanka iyo ardeyda aan degaanka ahayn. Hanoqoto qoys diiwaangalinayo ilma yar oo waqti dhow bilaabaya fasalka caruurta yar yar (Kindergartern), ama gabi ahaanba ku cusub aagga, ama haysta caruur galaysa fasalada 1-12, Xarunta soo dhawaynta ayaa waxay diyaar u tahay marwalbo ineey caawiso. Xarunta soo dhawaynta waxay kaa caawineysaa diiwaangelinta ardayda cusub waxaanad ka heli kartaa caawimaadyo, adeegyada iyo u gudbinta si loogu diyaariyo Iskuulka.
Adeegyada Xarunta Soo Dhawaynta
Macluumaad kusaabsan soo dhawaynta
Qiimaynta ardayda baraneysa qaybta luqadda ingiriiska
Gudbinta iyo ilaha macluumaadka caawimaadyada bulshada
Diiwaangelinta iyo beddelida Ardayda galeysa fasalada K – 12
Barnaamijka Iskuulka iyo macluumaad kusaabsan dhaqdhaqaaqa hawlaha
Liisaska Alaabta Iskuulka
Si aad u Diiwaangaliso Ilmaha Heerarka K-12
Booqo Xarunta Soo Dhawaynta oo Addreeskeedu yahay: 700 Seventh St. South, Waite Park. ( Waalid ama mas’uul waa inuu joogaa goobta )
Hubi in tallaalada eey waqti dhow yihiin ama buuxi shahaadada diidmada la ogsoon yahay
Haddey tahay marki kuugu horeysay oo aad iska diiwaangeliso Iskuulada Minnesota ama aad bilaabeyso fasalka barbaarinta caruurta yay yar, keen nooc ka mid ah aqoonsiga ardayga sida shahaadada dhalashada, baasaboor ama aqoonsi kale oo la mid ah.
Hadii aad u diiwaangalineyso fasalka barbaarinta caruurta yar yar ee (Kindergarten), waxaa loo baahanyahay in canugaagu maro baadhitaanka caafimaadka ee dhalaanka ka hor inta uu san bilaabin Iskuulka.
Si aad u Baddesho Arday Isla Degmada 742 Gudaheeda
Kala xiriir Harunta soo Dhawaynta lambarka ah: 320-202-6897